Arsivan'ny HIDDEN ARY FAHAFATESANA Archives - Pejy 2 amin'ny 10 - Fahafatesana Afrikhepri
Fifandraisana Sokajy NISY NISY ANDRIAMANITRA MISY ANDRIAMANITRA
NISY NISY ANDRIAMANITRA MISY ANDRIAMANITRA
Fanatrehana ny Afrikana mainty hoditra any Eoropa
Ilay mpahay tantara atao péorgie sy antropologika David Macritchie "antitra sy maoderina" dia milaza fa nisy fanjakana mainty tany Skotlandy, ny taranany dia: Douglas, Morrison, Murray, Murdoch, ...
Ny porofon'ny sivilizasiôna dia tototry ny 12 taona lasa izay!
Ny tsangambato Yonaguni (与 那 国 島 海底 地形 / 遺跡, Yonaguni-jima kaitei chikei / iseki?, Ara-bakiteny hoe "relief / ambanin'ny rano vestige an'i Yonaguni-jima") dia hita nandritra ny fahitana tamin'ny taona 1985 avy amin'ny mpandraharahan'ny fizahantany. anaty rano, Kihachiro ...
Ao amin'ny dian'i Kulkulcan sy Sommonocodom (Boudha)
Mikasika ny olin'i Olmecs, teny mahazatra mahazatra hanondroana ireo sivilizasiona lehibe an'i Amerika talohan'ny Columbian, dia nitentina tany amin'ireo toerana nisy azy ireo ny taolam-panjakan'olombelona ...
Ny ampahany lehibe amin'ny varotra andevo no namboarina?
Amerikanina 3.000 (antsoina hoe karana) farafaharatsiny dia fantatra fa nalefa tany Eropa teo anelanelan'ny 1493 sy 1501. Ny angano fivarotana andevo iray manontolo dia ny tantara manontolo ...
Tonga ny fotoana hamerenana ny tantarantsika marina
Tonga ny fotoana hamerina ny tantarantsika marina. Tsy resaka fanadihadiana vaovao tsy misy dikany akory izany, fa hanitatra ny mpihaino amin'ny tenin'ireo izay ...
Manana tantara lava i Afrika
Iza no nilaza fa tsy manana tantara i Afrika? Famintinana kely fotsiny hanehoana fa, ny mifanohitra amin'izay, izy no manana ny tantara tranainy sy lava indrindra. Prehistory Ny Homo voalohany dia niseho ...
Inona ny Blacks Ignored (Fizarana 2)
Heracles (Hercules), ilay maherifo malaza amin'ny angano grika dia naka ny anarany namboarina tamin'ny hr radical. Ity anarana ity, izay adika matetika amin'ny "Glory of Hera" dia manome fahatakarana hafa raha iray ...
Ny laingan'ny tantara amin'ny fanabeazana
Ireo boky ho an'ny sokajy XNUMX ka hatramin'ny XNUMX dia nosoniavin'ny "ekipa mpampianatra afrikanina". Iza avy ireo mpampianatra tsy mitonona anarana ireo? Tsy manana ...
Ny fiaviana Afrikanina ny kapitalisma
Aboubacry Moussa Lam dia miverina amin'ny dikany mety ho ny dikan'ny W3st, "Thebai", "Thebes", teny noforonina avy amin'ny famantarana hieroglyphic an'ny sampana w3s, zavatra iray ifandraisany ...
Tantara mitantara an'i Afrika (Fizarana 2)
Firy amintsika no tena mahalala na inona na inona momba ny sivilizasiona taloha afrikanina, izay tamin'ny androny dia toy ny mamirapiratra sy be voninahitra toy ny zava-drehetra amin'ny tarehy ...
Ny niavian'ny fenix
Ny fifandraisana atolotray eo anelanelan'ny afo sy ny vazy nw dia nohamafisin'ny sarin'i Benou, ilay phoenix an'ny fomban-drazana grika, tandindon'ny afo sy fahaterahana indray, izay ...
Tonga tany Amerika tsara ny afrikana talohan'ny Columbus
Ny biraon'ny governemanta, ny orinasam-barotra sy ny banky any Amerika dia mifikitra amin'ny fahatsiarovana ny Andro Columbus. Any amin'ny sekoly manomboka any ambony ka hatrany ...
Page 2 ny 10 Avant 1 2 3 ... 10 manaraka